PICS: Zimbabwe's new president visits ailing opposition chief | News24
Harare - Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa made a home visit on Friday to the leader of the country's main opposition party, Morgan Tsvangirai, who has been battling cancer.
The visit came as Zimbabwe's political parties prepare to begin campaigning for elections due later this year - the first since former president Robert Mugabe stood down following a brief military takeover.
Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa (R) shakes hands with the leader of the Movement for Democratic Change (MDC), the country's main opposition party, Morgan Tsvangirai (L), who has been battling cancer, during a visit at his home in Harare. (File:AFP)
Tsvangirai won the most votes in the first-round of the 2008 presidential election in which he faced off against Mugabe - but it was not enough to avoid a run-off against Mugabe.
Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa (R) meets the leader of the Movement for Democratic Change (MDC), the country's main opposition party, Morgan Tsvangirai (C), flanked by his wife Elizabeth Macheka (L), during a visit at his home in Harare. (File:AFP)
zanu-pfmdc-temmerson mnangagwaconstantino chiwenganelson chamisamorgan ­tsvangiraizimbabwesouthern africa
50% - 1751 votes
22% - 768 votes